High Quality SYGAV Android car stereo radio ho an'ny 2014-2017 Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart miaraka amin'ny OEM Rockford Fosgate System 10.1 HD touchscreen GPS navigation Wireless CarPlay WiFi Bluetooth 5.0 orinasa sy mpanamboatra | SYGAV
Radio stereo fiara SYGAV Android ho an'ny 2014-2017 Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart miaraka amin'ny OEM Rockford Fosgate System 10.1 HD touchscreen GPS navigation Wireless CarPlay WiFi Bluetooth 5.0
Vidiny: USD $599.99
Ilaina ve ny mampiasa Android amin'ny fandefasana DVD? Inona no tombony amin'ny mahazatra?
1. DVD navigation, ny rafitra misy dia WinCE sy Android andiany roa. Ny navigateur mahazatra dia mampiasa rafitra WinCE.
2. Ny fitetezana ny rafitra WinCE dia somary matihanina, ary ny sehatra dia tena matotra. Betsaka ny sehatra fitaovan-tserasera matihanina no miara-miasa akaiky aminy, toy ny an'i Yuanfeng.
3. Eo amin'ny sehatry ny fitetezana finday, toy ny finday marani-tsaina na solosaina tablette, dia mahazatra ihany koa ny fitetezana portable mifototra amin'ny sehatra Android.
4. Ny tombony amin'ny Android dia manana fanohanana multimedia feno izy. Ny fampiharana rindrambaiko manohana ankehitriny dia mety kokoa noho ny an'ny sehatra WinCE.
5. Fa ho an'ireo izay manome navigateur matihanina, ny WinCE dia matotra sy matihanina kokoa. Tsy latsa-danja mihitsy ny fanohanan'ny rafitra WinCE ho an'ny multimedia.
6, ireo sehatra fampandrosoana rindrambaiko roa lehibe (orinasa fampandrosoana WinCE dia Microsoft, orinasa fampandrosoana Android dia Google) dia tsy afa-misaraka.
7. Raha misafidy vokatra WinCE camp ianao dia tsy maintsy manana version 6.0 na ambony, raha misafidy vokatra Android camp ianao dia tsy maintsy manana version 4.0 farafaharatsiny, ny fepetra takiana ambany indrindra.
8. Ny maitso sy ny radish dia manana ny fitiavany manokana, misafidy araka ny filany sy ny tiany. WinCE dia mifanaraka amin'ny rafitra Windows, ary Android dia mifanaraka amin'ny Linux.
9. Amin'ny fitetezana ny rafitra Android, ireo mpampiasa dia hametraka tsy misy fahafantarana rindrankajy be loatra, hifanelanelana, ary hahita mora foana ny tsy fahombiazan'ny rindrambaiko. Mitandrema mba hadio foana ny rafitra.
10. WinCE dia manana fepetra ambany kokoa amin'ny fitaovan'ny navigateur ary kely kokoa ny lozisialy, noho izany dia mety ho fitetezana tokana izy io ary azo antoka. Aleo manadio matetika.
teo aloha: Radio stereo fiara SYGAV Android ho an'ny 2008-2017 Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart tsy misy OEM Rockford Fosgate System 10.1 HD touchscreen GPS navigation Wireless CarPlay Android Auto WiFi Bluetooth 5.0
Manaraka: SYGAV 10.2 radio stereo fiara Android ho an'ny 2013-2015 Nissan Altima GPS Fikarohana CarPlay Android Auto WiFi Bluetooth
Stereo fiara Android Auto
SYGAV 9″ radio stereo fiara Android ho an'ny 201...